A Splendid Rose's . . .
ညိုပြာပြာလတာပြင်ခြေရင်း... လှိုင်းသက်ရာဗေဒါတက်... လှိုင်းသက်ရာဆင်း.... ဆင်းရလဲမသက်သာ.. အုန်းလက်ကြွေ.. ရေဘောလော... မျောစုန်လို့လာ။ အဆင်းနှင့်အလာ.. ဗေဒါမအထွေး.... အုန်းလက်ကြွေသူ့နံဘေး... ဆောင့်ခဲ့ရသေး.. ဆောင့်ခဲ့လဲမသက်သာ... နောက်တကြိမ်ဒီတစ်လုံး.. ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ... မြုပ်ပြန်ပေါ့ပေါ်မလာ.... မဗေဒါအလှတလံကွာ.... လှိုင်းအကြွပေါ်လိုက်ပြန်ရ... ပေါ်ပြန်လည်းမသကသာ ချောင်းအလယ်မြောင်းဆွယ်ထဲက ဘဲထွက်လို့လာ.... ဘဲအုပ်ကတစ်ရာနှစ်ရာ.... မဗေဒါက တပင်တည်း.... အယက်အကန်ခံလို့.... ဗေဒါပျံအံကိုခဲပန်းပန်လျက်ပဲ။
USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဥ...
USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စု မြန်မာ့ရေပြင် အနီးဆက်ရှိနေတာဘာသဘောလည်း...
Nagis ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ Relief Materials တွေသယ်လာတယ် ဆိုပြီး Bay of Bengal ထဲမှာ အမေရိကန်ရေတပ်က USS Essex သဘောင်္အမှတ်(LHD-2)ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စု (Amphibious Ready Group)ရောက်နေတာအင်မတန်ထူးဆန်းပါတယ်. မြန်မာအစိုးရကခွင့်မပြုလို့ USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စုက စောင့်နေရပါတယ်ဆိုတာရီစရာပါ...Nargis Victims တွေကိုသာ တကယ်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စုကို Thai သို့မဟုတ် Japan အထိပြန်ခေါ်ပြီး Relief Materials တွေကို အရပ်ဘက် ကုန်သွယ်သဘောင်္တွေပေါ်ပြောင်းတင် ပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာရင်ရပါတယ်. အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဓနအင်အားနဲ့ဆိုရင် မလုပ်နိုင်စရာမရှိပါ..ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မြန်မာပြည်ကိုရာက်မှာပါ..မြန်မာအစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ Intervention လုပ်မှာမဟုတ်ဖူးလို့ ကကွယ်ရေးဝန်ကြီး Robert Gates က ကတိပြုထားသေးပြန်ပါတယ်...မြန်မာအစိုးရကလည်း ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုလို့ ဆိုထားပါတယ်..Ban Ki Mon လာတော့လည်း အဲဒီ့အကြောင်း မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူး...ဒီတော့ USS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စု အနေနဲ့ ၀င်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပါပြီ...ဒါဆိုUSS Essex ဦးဆောင်တဲ့ ကမ်းတက်ချေမှုန်းရေးအသင့်ရေယာဉ်စု မြန်မာ့ရေပြင် အနီးဆက်ရှိနေတာဘာသဘောလည်း..ရှင်းနေပါပြီ...ပွဲဆူအောင် သက်သက်လုပ်နေတာပါ...ဒီလိုမဟုတ်ပဲစေတနာမှန် ဆိုရင်တော့ကုန်သွယ်သဘောင်္တွေပေါ်ပြောင်းတင် ပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပါ...အခုလဲ Airlift နဲ့ C 130 လေယာဉ်ခေါက်ရေ ၅၀ လောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကပို့လှူထားပြီးပါပြီ....ကျေးဇူးပါ...ဒါပေမဲ့ USS Essex Amphibious Ready Group is not welcome ပါ..
Posted by ' at 8:16 PM0comments
Hillary Cliton is almost defeated by Obama in Democratic presidential marathon. Union of Myanmar Constitution is almost adopted though the results from 47 disaster hit townships are yet to be declared. So we will see the change in our country. But we are not sure whether it will be good for our country. However SPDC will be definitely gone after 2010 elections and we will see the first ever parliament in our life time. One important thing is that 1-year detention for Daw Su Kyi is completed this midnight. I hope Myanmar Generals will release her just before donor conference. She has casted her ballot this morning at her house. Can u imagine what she would say in the vote? YES or NO? Nargis victims are still longing for help.
Posted by ' at 4:25 PM0comments
ဟိုတနေ့ကပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဆွဲဖတ်မိတယ်...ကြည့်လိုက်တော့ နာမည်ကျော်ဆရာတော်တပါးရဲ့ " အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်နေတယ်...ဆရာတော်ကိုတော့ကြည်ညိုပါတယ်...ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းတွေအများကြီး စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်...ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ဘာသာစကားကိစ္စပဲ...တရားနာ ပရိတ်သတ်က ဗမာ..တရားဟောဆရာတော်ကဗမာ...တရားတော်တွေက ပါဠိ..ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်က ဘာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ် လိုတွေ ကြားညှပ်ဟောထားလဲဆိုတာ မရှင်းဘူးဖြစ်နေမိတယ်...အင်္ဂလိပ် လိုတတ်ကြောင်းပြချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယ်..သိသူများ ဖြေပေးကြပါဦး...ဒုတိယအချက်ကတော့ အနှစ်သာရပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်..အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေ ဆိုတာ ထေရ၀ါဒရဲ့ အယူအဆမဟုတ်ဘဲ လောကီရေးရာသာဖြစ်တယ် လိွု့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်...အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေဖို့အတွက်က တရားစာအုပ် မဖတ်ဘဲ Dale Carnegie ရဲ့ How to Stop Worrying and Start Living(သောက ကင်းဝေးနေနိုင်ရေး) စာအုပ်ဖတ်ရင်လဲရပါတယ်...ထေရ၀ါဒ ရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ နီဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကနေတော့ မသွေဖယ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်....
နောက်တချက်ကတော့ ဘုန်းကြီးဘွဲ့တွေရဲ့ နောက်မှာ BA, B Sc, MA, PhD တို့ ဒေါက်တာ အရှင်---- ဆိုပြီးတပ်တာတွေ ဟာဖြစ်သင့်ပါသလား...ပကာသနတွေ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်တွေပါ...ရှိပါသေးတယ်...ဆရာတော် တပါးက ကိုးဘွဲ့ရ ဆိုပြီးအမည်တွင်နေပါတယ်...ဒါနဲ့ နာမည်ကြီးဂျာနယ်တစောင်က အဲဒီ့ဆရာတော်ကို အင်တာဗျူးပြီး..." ဆရာတော်က ဘွဲ့တံဆိပ်ပေါင်း ၁၀ ခု ၁၁ ခုလောက် ရထားရဲ့သားနဲ့ ကိုးဘွဲ့ရ ဆိုပြီး ဘာလို့ အမည်တွင်တာပါလဲဘုရား " လို့မေးတော့....ဆရာတော်ရဲ့အဖြေက အံ့သြ မှတ်သားစရာပါ..." ကိုးဘွဲ့ရ ဆိုပြီးအမည်ပေးထားတာ ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူး LOGO လေးအနေနဲ့ပါ...ဘွဲ့တွေဘယ်လောက်ရရ ကိုးဘွဲ့ရ ဆိုပြီးပဲထားမှာပါ..." တဲ့...ဘုန်းကြီး ဘွဲ့ တောင်LOGO ဖြစ်ရတယ်လို့ဗျာ...အမှားပါရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ...ဘာသာရေးကိုစော်ကားခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါခင်ဗျာ....
Posted by ' at 11:50 PM 1 comments
သြော်......၁၅ ရက်လောက် လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Kosovo ဆိုတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု အသစ်ပေါ်နေပါရောလား..US မှာလဲ Obama က အခြေအနေ ကောင်းလို့...Cuba မှာတော့ သက်တော်ရှည် သမ္မတကြီး Castro သွားရှာပြီ..Pakistan မှာလည်း Musharaf ကအခြေအနေမကောင်း..Russia မှာတော့ Putin လည်း သန်ဘက်ကာဆို ပြုတ်ပြီ...ရေနံက ၁၀၀ $ ကျော်....မန္တလေးမှာ Sky Walk ကြီးကပြာကျ......ကမ္ဘာကြီးကအတော်ပြောင်းလဲနေပြီပဲ.....ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လဲ အသက်တစ်နှစ် ကြီးသွားပြီလေ....
Posted by ' at 2:06 PM2comments
အချိန်စောကြွေလွင့်ကာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်စွန့်လှုခဲ့သော သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့် မျိုးမင်းချစ်၊ မင်းသန့် နဲ့ ပြည့်စုံစိုး တို့ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်...
Posted by ' at 9:28 AM2comments
ကျွန်ခေတ် (၁၈၄၂- ၁၉၄၈)
လွတ်လပ်ရေးခေတ် (၁၉၄၈- ယနေ့အထိ)
Posted by ' at 11:15 PM 1 comments
တောင်က ကခုန်၊ စည်းချက်တှုံမျှ
သောင်းသောင်းသိမ့်သိမ့်၊ ငြိမ် ငြိမ့် ငြိုးငြိုး
Posted by ' at 10:50 PM2comments
အချိန်စောကြွေလွင့်ကာအသက်စွန့်လှုခဲ့သော သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့် မျိုးမင်းချစ်၊ မင်းသန့် နဲ့ ပြည့်စုံစိုး တို့ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်...
Posted by ' at 9:06 PM 1 comments
ပေါက်စီ နဲ့ Mc Donald ဖိုက်တင်ပွဲ.............
တရုတ်က အမေရိကန်ကို တော်တော်လေး အန္တရာယ်ပေးနိုင်နေပီ ...ဒါကတော့ အိမ်ဖြူဖြူကြီးက လူတွေရဲ့ လက်သုံးစကားလေ...ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ..တရုတ်ကသူ့မှာ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ(Foreign Exchange Reserve) ဒေါ်လာ ၁.၅ ထရီလီယံ (၁ ထရီလီယံက ၁ နောက်မှာ သုည ၁၂ လုံး ) ရှိတယ်...ဒီအထိကထားလိုက်ဦး ဘာပြသနာမှ မရှိသေးဘူး..ဒါပေမဲ့ ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ အကွက်မြင်ပုံများကတော့ အဲဒီ့ Foreign Exchange Reserve တွေထပ်မံတိုးပွါး အောင်ဆိုပြီး Foreign Exchange Reserve ထဲက ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ကို အရင်းပြုပြီး CIC ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကိုထူထောင်သတဲ့...ကိုပေါက်ဖော်တို့က ဒီတင်မရပ်သေးဘူးဗျား..အမေရိကန် stock ဈေးကွက်ထဲက Blackstone Group LP တို့ Morgan Stanley တို့လို ကုမ္ပဏီတွေမှာ CIC ကရှယ်ယာတွေ ၀ယ်ပါလေရော....ကိုယန်ကီးတို့ခင်မျာ ဆွေ့ဆွေ့ကိုခုန်လို့...နဂိုကတည်းကိုက ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်မှာ အမေရိကန်က ဒေါ်လာ ၂၈၀ ဘီလီယံရှုံးနေတာ....ဒီကြားထဲ Made in China ပေါချောင် မကောင်းတွေကြောင့် ကိုရွှေအမေရိကန်တို့ ဒုက္ခတွေရောက်....ဒီလို weather မ fine ပါဘူးဆိုမှ CIC က Foreign Exchange Reserve တွေလှိုင်လှိုင်သုံးပြီးဝင်လာတော့ တို့ယန်ကီးကြီး ဒေါသထွက်လိုက်တာများ ပြောမနေနဲ့တော့...ပေါက်စီ နဲ့ Mc Donald ဖိုက်တင်ပွဲက တော့ ၀မ်ချိုင်း နဲ့ ရွှေဓူဝံ ပွဲထက်ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျို့..
ပေါက်စီ နဲ့ Mc Donald ဖိုက်တင်ပွဲတွေဆက်တင်ပြပါဦးမယ်
William Slim ရဲ့ ဉပမာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အင်ဖာတိုက်ပွဲပြီးတော့ ဗြိတိသျှ အမှတ် ၁၄ တပ်တော်က မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ထိုးစစ် ဆင်တယ်..အမှတ် ၁၄ တပ်တော် အောက်က အမှတ် ၄ တပ်မကြီးဟာ ချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဆီ ချီတက်နေတယ်.ဒီတပ်တွေကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့ပေးရမလဲ ဆိုတာဟွာအမှတ် ၁၄ တပ်တော်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး William Slim အတွက် ခေါင်းခဲစရာပေါ့ .ကားလမ်းကမကောင်း .လေယာဉ်ကမလောက် .တပ်တွေ က စစ်ပန်း နယ်မြေကကြမ်း...ဒါနဲ့ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး William Slim ကသူ့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတပ်မှူးကို ခေါ်လိုက်တယ် ပြီးတော့...ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တာဝန်ပေးမယ်..အမှတ် ၄ တပ်မကြီးအတွက် ချင်းတွင်းမြစ် ကြောင်း ကနေ နေ့စဉ် ရိက္ခာတန် ၅၀၀ လှေတွေနဲ့ ပို့ပေးချင်တယ်ဗျာ...ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကို ဒီသစ်တောတွေနဲ့ ဒီမြစ်ကလွဲပြီး တခြား ဘာမှပေးစရာမရှိဘူး..အချိန်ကလဲ ၂ လပဲ ရမယ် လို့ပြောလိုက်တယ်.ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက အင်ဂျင်နီယာ တပ်မှူးရဲ့ အဖြေစကားကိုပါ......အားမာန်အပြည့်ရှိလို့ အဲဒီ စကား ကို အရမ်းကြိုက်တယ်. .အင်ဂျင်နီယာတပ်မှူးက ....
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဗျား ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဆို ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြီးအောင်လုပ်မယ်၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ အချိန် နည်းနည်းယူပါမယ်၊ လူသာမန်တွေ မလုပ်နိုင်ဘဲ တန်ခိုးရှင်များသာ ဖန်ဆင်းမှရမဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ အချိန်တစ်လယူရပါမယ်“
..တဲ့.တကယ်အားကျစရာကောင်းတယ်ဗျာ.အင်ဂျင်နီယာ တပ်မှူး Bill Hasted ဟာ အိန္ဒိယ ကအလုပ် သမားတွေ ကို လေယာဉ်နဲ့ခေါ်၊ သစ်တောထဲကသစ်တွေခုတ်ဆင်တွေနဲ့ဆွဲ၊ လှေထွင်း၊ လှေမှာ ကားအင်ဂျင်တွေတပ် နဲ့လုပ်လိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး William Slim လိုချင်တဲ့အချိန်မီ အောင်မြင်သွားတယ်သတဲ့
William Slim ရဲ့ Defeat into Victory ထဲက ကိုးကားဖော်ပြတာပါ
Posted by ' at 10:10 PM0comments